कुन रोगीले कस्तो जुस पिउँदा राम्रो ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home जानकारी कुन रोगीले कस्तो जुस पिउँदा राम्रो ?
मान्छेले रोग अनुसारको ओखती र खानेकुरा खानु जरूरी हुन्छ । यसैगरी कुनै पनि रोग वा स्वास्थ्य समस्यामा विचार गरेर जुस पिउनु उपयुक्त हुन्छ । कुन रोग लाग्दा कुन जुस पिउने भन्ने कुरा पनि जान्न जरुरि हुन्छ किनकि विभिन्न प्रकारका जुसका बिभिन्न फाईदाहरु हुन्छन।
भोक नलाग्दा भोक नलाग्ने मान्छेले बिहान खाली पेट कागतीपानी खानुपर्छ अनि खानुअघि अदुवाको पेस्टमा बीरेनुन हालेर खानुपर्छ ।रगत सफा गर्न शरीरमा विद्यमान रगतलाई शुद्ध बनाउनका लागि कागती, गाजर, काउली, पालुंगो, स्याउ, तुलसी र बेलका पातहरूको रस लाभदायक हुन्छ ।
निम्न रक्तचाप लो ब्लडप्रेसर भएकाहरूले गुलिया फलको रस पिउनुपर्छ भने अमिलो फलको रस पिउनुहुँदैन । अंगुर र मौसमको रस लाभदायक हुन्छ ।जन्डिस जन्डिस हुँदा रोगीले अंगुर, स्याउ र मौसमको रस पिउनुपर्छ । किसमिस डुबाएको पानीले पनि राम्रो गर्छ ।
अनुहारको दाग अनुहारको दाग हटाउनका लागि गाजर, खरबुजा, प्याज, तुलसी र पालुंगोको रस लाभदायी हुन्छ ।क्यान्सर क्यान्सरबाट मुक्तिका लागि गाजर र अंगुरको रस पिउनु राम्रो हुन्छ ।
त्यसैले कस्तो बेलामा अथवा कस्तो रोगको लागि कुन जुस पिउँदा फाईदा गर्छ भन्ने जानकार सबै हुनुपर्छ।
Previous articleसन्दीप लामिछाने बने ‘आइसीसी प्लेयर अफ द मन्थ’
Next articleयो हो संसारकै ठूलो मकैको घोँगा फल्ने ठाउँ
TLN Post - December 17, 2021 0
विश्वमा अनेक अनेक सर्वेक्षण गरिन्छ। सर्वेक्षणका अनौठा नतिजा निस्किन्छन। हालै गरिएको विश्वव्यापी ड्रग सर्वेक्षण अनुसार अस्ट्रेलियन विश्वमै सर्वाधिक मदिरा सेवन गर्नेमा परेका छन् । सर्वेक्षण...
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव– सबैखालका परीक्षा स्थगित गर्नुपर्छ
कमेडी च्याम्पियनमा कन्टेन्ट चोरी गर्नेलाई शो बाट हटाईयो